Wararkii ugu dambeeyay tiro hoobiyaal oo maanta lagu weeraray madaxtooyadda Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay tiro hoobiyaal oo maanta lagu weeraray madaxtooyadda Soomaaliya
Waxaa duhurnimadii maanta magaalada Muqdisho laga maqlay tiro hoobiyaal ah oo lagu weeraray xarunta madaxtooyadda Soomaaliya, xilli halkaasi uu shir uga socday golaha wasiiradda cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Sarkaal ku sugan xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa u xaqiijiyay in mid ka mid ah hoobiyaashaasi uu ku dhacay inta u dhaxeeysa guriga iyo xafiiska madaxweyne Farmaajo ee ku dhexyaalla xarunta madaxtooyadda Soomaaliya, iyadoona aanay jirin wax qasaare nafeed oo hoobiyahaasi ka dhashay.
Sidoo kale, afar hoobiyaal kale ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaceen guryo ku yaalla agagaarka xarunta madaxtooyadda ee Villa Soomaaliya, iyadoona tiro dad ah uu dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen.
6 qof oo midkood askari yahay ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacantay, waxaana goobaha ay hoobiyaashaasi kusoo dhaceen markii dambe gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, ma jirto cid illaa iyo haatan sheegatay mas’uuliyadda hoobiyaashaasi lagu weeraray madaxtooyadda Soomaaliya, inkastoo weerarada ceynkaan oo kale ah looga bartay Xarakada Al-shabaab oo dagaal xoogan kula jirta dowladda Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii ugu dambeysay waxaa magaalada Muqdisho si xowli ah ugu soo batay weerarada iyo qaraxyadda ay magaalada ka geysanayaan Xarakada Al-shabaab, iyadoona arrinkaasi aanay dowladda waxba ka qaban.